Bikram Gyawali | Nepali Stories
Bikram Gyawali – Ma Marda Ko Tyo Kshan
बिक्रम ज्ञवाली – म मर्दाको त्यो छेण
एक्कासी एकदम आनन्द आयो । फेरी मलाई निकै गाह्रो पनि त भएको थियो । मेरो कानले सुन्न त सक्थ्यो तर मुखले सुनेको कुरा फर्काउन सकिरहेको थिएन । मेरो आगडी आउने मान्छे ले मलाई चिनिस् भनेर सोध्थ्यो तर खै को रहिछ ठम्याउनै सक्थिएन ।
एक त बुढो भएको शरीर त्यसमाथी धेरै रोग । तर आज अचानक सबै दु:खाइ सकियो । अनी फेरी मैले आफु लडेर सुतेको आँफै ले देखेको छु । न त मैले देखेको ‘म’ ले सास फेरेको थियो न कुनै हलनलन । एकछिन पोछी छोरी आइ र बाबा भनेर रुन लागि । अनी श्रीमती चिच्चाएर डाको छोड्दै कराउँदै “मलाई एकलै छोडेर किन जानु भयो लैजानुस् सँगै ………. ” भनेर छोड्दै रुन लागि ।
अनी बिस्तारै रुवा बासीको ठुलो टान्दव नै हुन लाग्यो । फेरी कोइ भन्थे ” बिचरा दु:ख पाएको थियो गएर ठिकै भयो ” । यस्तै यस्तै बीचमा कोइ ले हरियो बाँस ल्याएछ अनी मलाई सेतो कपडाले बेर्न लागेका रहिछन् कोइ । रुवा बासिको पनि चर्को चर्को आवाज आएको थियो । मैले हेर्दा हेर्दै मलाई कपडाले बेरेर बाश मा राख्न लागे छर छिमेकीहरु र आफन्तहरु ।
“लाश लाई छिटो छिटो सेलाउन पर्छ” भनेर एक जाना बुढाले भन्दा पो म झसंग भए । हिज सम्म को जिवित म आज लाश पो भएको रहेछु भनेर ।
फेरी पोको पारेको मलाई बासमा राखेर बाध्न लागे सबै जाना मिलेर , बिस्तारै आफन्त हरु आउदै थिए । अनी कोइ चाही बिचरा एकदम असल मान्छे थिए गए भन्थे भने कोही चाही के गर्नु चली आको चलन भन्थे। कोइ चाही म सँग अली दिन आगडी गरेको झगडा र कल सम्झेर पछुताउदै पनी थिए । सबै जम्मा भई सके पछी मलाई राखेको बास सँगै मलाई पनि बोकेर हिंड्ने तर्खर गरे । आगाडी एक जना लाभा फाल्दै राम राम भन्थ्यो र पछाडिकाहरु सत्य हो भन्दै सन्ख फुक्दै थिए ।
एकछिनमा घाट पुगे तिनीहरु । म पनि पोछी पोछी गऐको थिए । यो घाटमा थाहा छैन म कतीको मलामी आएको थिए पहिला । तर आज मेरो आफ्नै मलामी संग मेरै लाश जलाऊन आएको छू । तल खोलाको छेउमा कसैले पहिल्य आएर दाउराको चाङ लगाएको थियो । अनी खोलामा मेरो खुट्टा छ्वाएर छेऊमा सानो आगो बाले । एक जना मरै घरको छेउका बुढाले “सबें सामान तयार छ ?” भने पोछि सबे मलामी मिलेर पोकाहरु हेरे । अनी ” ठिक छ ” । भन्ने उत्तर आयो ।
” ल अब लाशलाई चितामा रखौं ” भन्ने कोहीको आवाज आयो । सबै मेलेर मेरो शरिरलाई चितामा राखे । पण्डित बाले छोरालाई ” ल आउ बाबु आगो देऊ ! के गर्छो त बा चलेको चलन !! यस्तै हो संसारको नियम जन्मे पोछि मर्नै पर्ने । ” भनेर हातमा आगोको मसाल दिए । अनि फेरी भने ” ल तिन फन्का गुमेर आगो देउ । ”
हुन त पहिला मैले आफै कती छोराहरुलाई यसरी नै संझाएको थिए मलामी आको बेला । तर आज मैरो आफ्नै चिता जल्दैछ । म आफे रमिते भएको छु मेरो समसानको । म आफै एउटा साक्षी बनेको छु मेरो मृतुको । हिजसंम दुनिया हिड्ने मेरा खुट्टा , बाच्न‍लाई स्रम गर्ने हात , खाने मुख , दुनिया देख्ने आँखा , समग्रमा पुरै शरीर सबै । तयारी अबस्थामा थिए । जल्नका लागी तयार थिए ।
त्यसको लगतै छोराले मसाल लिएर चितामा तिन फन्को मार्यो । अनि बिस्तारै मेरो मुख्मा राखिदियो बलिरहेको मसाल । हिजसंम तातो चियाले समेत पोल्ने मुख आज आगोले बाल्दा पनि केही भएन । चिताको आगो बल्दै गयो मा रमिता हेर्दै गए । हेर्दा हेर्दै आगोको लफ्टा पुरै चिता मा पुग्यो ।
म हेर्दै थिए मेरो हात पहिला खरानी भयो । अनी खुट्टा । वास्तवमा धैरैनै पिडा भएको थियो मलाइ आफु जलेको हेर्न । त्यो आगोले मलाई जलाउँदै त थियो तर त्यसको जलन भन्दा पनि आफु जिवित हुदाको कुराहरुले मलाई पोलिरहेको थियो ।” छोरा -छोरी, स्वास्नि , दाई , भाई परिवार , साथि संगी ,……. को नै रहिछ त आफ्नो भन्नु ! जिन्दगी हुनेबेला संम सबै आफ्नै हो भन्ने लाग्थ्यो ! तर आज आफू पनि ता आफ्नो रहिनछु । आज आएर आफु जलेको नाटको दर्शकबाहेक म अरु के नै गर्न सके त ?”
“बाचुन्जेल पैसाको नाममा , सम्पत्तिको नाममा , मान , पद,…. आदी ईत्यादी को नाममा कति संग झगडा गरे होला । आखिरमा आफैले जन्म दिएको छोराको हातले जल्नु बाहे अरु के नै रहिछ त मान्छेको जुनि ?”
तर आज आएर यो सबै सोच्दा र पश्चताव गर्दा म मरिसकेको छू । लाश् बनिसेको छु । अनि चिता बनेर जलिरहेको छु ।
म यता सोच्न थाले उता मेरो शरिर त सकि सकेको रहिछ । कोहिले ठुलो बाँसले मेरो बचेको शरिरलाई पिट्दै थियो। हुन न अब कहाँ त्यो शरिर थियो र माशुको डल्लो मात्र थियो । त्यहि पनि उल्टाइ पल्टाइ पिट्दै थिए । कोहि मलामी भने फर्कने तर्खरमा थिइ । कोहि भने ” अब भोक लाग्यो केही खानु पर्छ” भन्दै थिए ।
“लौ ! अब बचेको सानो टुक्रो मलाई एउटा अङ्खरामा रखेर पनिमा बगाईदिए ! ” अनि मलाई लाग्यो ”
म सकिए । मेरो अस्तित्वबाट नाम निशान सबै हरायो । बिस्तारै साथीले भुल्छन मलाई । अनि आफ्न्तले । समय संगै छोरा छोरीले । तर पनि एक जनाको मलाई मरपछि पनि माया लाग्दै छ । हो मेरो पत्नि को सायद सेतो कपडा र खालि सिन्दुर अनि खाले हातले घर्दा ऊ मलाई आफु चिता मा म जस्तै सकिनी बेला संम पनि संझी रहन्छिन् ।
सबै मलामी त फर्किए मलाई बिदा गरेर तर मा अब कता जाउँ ! न यमदुत आयो मलाई लिन, न त म उडेर बेतर्नि नदि पगेको छु !! मैले जिन्दगि भर् बनाएको स्वर्ग या नर्क , खेै कहाँ छन् ? आज थाहा भो मलाई ” स्वर्ग , नर्क , पाप , धर्म , अनि भगवान् र मन्दिर यो सब मान्छेको डरले बनेको कुरा रहिछ । तर अब थाहा पाएर के गर्नु म न मरिपो सकेको छु ।
Posted in Bikram Gyawali
Tagged Bikram Gyawali - Ma Marda Ko Tyo Kshan Bikram Gyawali's Nepali Story Ma Marda Ko Tyo Kshan Literary work of Nepali Story Writer Bikram Gyawali Literatures of Nepali Story Writer Bikram Gyawali Nepali Author Bikram Gyawali Nepali Katha Nepali Katha Ma Marda Ko Tyo Kshan by Bikram Gyawali Nepali Kathakar Nepali Kathakar Bikram Gyawali Nepali Rachanakar Kathakar Bikram Gyawali Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Bikram Gyawali Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Bikram Gyawali Nepali Story Nepali Story Blog Nepali Story Ma Marda Ko Tyo Kshan by Bikram Gyawali Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Bikram Gyawali Read Nepali Stories Online Sahityakar Bikram Gyawali Ka Nepali Katha Haru